Bruno Fernandes oo shaaca ka qaaday xiddiga uu kaga daydo kubadda cagta – Gool FM
Bruno Fernandes oo shaaca ka qaaday xiddiga uu kaga daydo kubadda cagta
(Manchester) 02 Abril 2021. Ciyaaryahanka khadka dhexe kooxda kubadda cagta Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa wuxuu shaaca ka qaaday xiddigaha ugu fiican khadka dhexe taariikhda kubadda cagta.
Tan iyo markii uu yimid kooxda Manchester United, Bruno Fernandes wuxuu wacdaro ka dhigay horyaaalka Premier League waxaana lagu qiimeeyaa mid ka mid ah khadka dhexe ee ugu fiican adduunka, si la mid ah Kevin De Bruyne, Luka Modric iyo Frenkie de Jong.
Bruno Fernandes ayaa uga jawaabay qaar ka mid ah su’aalihii ay ku weydiinayeen taageerayaashiisa barta Twitter-ka, isagoo xusay in Andres Iniesta uu yahay xiddiga uu kaga daydo kubadda cagta, wuxuuna carabka ku adkeeyay inuu isku dayayo inuu isaga ku daydo marka uu ku jiro garoonka.
Mar la weydiiyay su’aal aheyd daafaca aan qadarinta lahayn, Bruno Fernandes wuxuu ku jawaabay: “Giorgio Chiellini.”
Sidoo kale Bruno Fernandes ma uusan qarin rabitaankiisa ah inuu arko Sporting Lisbon oo ku guuleysata koob tartamada Yurub ah.
Mar wax laga weydiiyay ciyaaryahanka khadka dhexe ugu fiican taariikhda, wuxuu yiri:
“Way adag tahay in la doorto, laakiin kuwa aan ku daawaday waxaan dhihi doonaa Andres Iniesta iyo Zinedine Zidane.”